2076 माघ 15, बुधबार
'पासवर्ड'मा सन्नी प्रचारकै लागि मात्र अटाइएको होइन': निर्माता विक्रम जोशी
सिनेपाटी | प्रकाशित: २०७६, भाद्र २२, आईतबार
यही भदौ २७ गतेलाई प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको चलचित्र 'पासवर्ड' को निर्माण घोषणा देखी नै चर्चा छ । बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीको प्रवेश पछि चलचित्र प्रतिको कौतुहलता अझ बढेको छ । अनुपविक्रम शाही, विक्रम जोशी (विक्की), बुद्धि तामाङ, रविन्द्र झा, प्रविण खतिवडा, धिरेन शाक्य, लिजा सुनार, परि राना, छुल्ठिम गुरुङ, एभरेस्ट सूर्य बोहरालगायतका कलाकारको पनि अभिनय रहेको यस चलचित्रलाई विक्रम जोशीले निर्माण गरेका हुन् । यसअघि ‘ह्याप्पी डेज’मा पनि अभिनय र लगानी गरेका विक्रम युकेमा बस्दै नेपाली सिनेमामा अभिनय र लगानी गरिरहेका छन् । विक्रम ‘पासवर्ड’को प्रिमियरमा नेपाल आउँदै छन् । तर नेपाल पब्लिसिटीमा उपस्थित हुन् नसक्ने भएपछि उनले युकेबाटै मिडियासँग आफ्ना कुराहरू राखिरहेका छन् । उनका अनुसार एक्सन, थ्रीलर र सस्पेन्स जनरामा एउटा पूर्ण मनोरञ्जन प्रदान गर्ने यस चलचित्रले दर्शकलाई चलचित्र हेरुन्जेल बाँधिरहन्छ । निर्माता समेत रहेका उनले चलचित्रमा धनी बाउको एक व्यापारी छोराको भूमिका निभाएका छन् जो आफ्नो देशप्रति, इमानदार र बफादार छ । मातृभूमिको समस्यासँग सदैव लड्न तयार एक देशभक्ति युवकको बलियो भूमिकामा आफूलाई उतारेको उनी दाबी गर्छन् ।
पासवर्डको ट्रेलरमा एउटा उक्ति छ ‘नेपालबाट चोरी भएर विदेश पुगेका मूर्ति फिर्ता गर्ने सङ्घर्ष ।’ यो कतिको सत्यसँग जोडिएको छ भन्ने प्रश्नमा विक्की उर्फ विक्रम भन्छन्, नेपालबाट मूर्ति चोरेर विदेश लैजाने यथार्थ नै हो । सञ्चारमाध्यममा यस्ता खालका समाचार आइरहेकै हुन्छन् । तर, ‘पासवर्ड’ यही सत्यमा आधारित तथ्य परक चलचित्र होइन । यही मुद्दालाई हामीले मनोरञ्जनमा ढालेका छौँ । तैपनि अन्त्यमा यो जघन्य अपराधको विरुद्धमा लड्नु पर्छ भन्ने सन्देश ‘पासवर्ड’ले दिन्छ । यसै गरी सन्नी लियोनीसँगको टिम अप कथाको माग हो वा पब्लिसिटिको माध्यम ? धेरैको दिमागमा बसेको प्रश्न हो यो । यसबारे उनी भन्छन्, 'सन्नी लियोनी प्रचारकै लागि मात्र अटाइएको होइन । यदि उहाँ जोडिदा ‘पासवर्ड’को पब्लिसिटी हुन्छ भने त्यो हाम्रो लागि राम्रो हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली चलचित्रको पहुँच पुर्‍याउनु हो । जसको लागि चर्चित विदेशी कलाकारलाई जोडेका हौँ । हामीले विदेशी चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर मात्र हुँदैन । त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारलाई नेपाल भित्र्याउने हिम्मत पनि राख्नु पर्छ । हामी नेपाल रिलिजको एक साता पश्चात् विश्वका १२ देशमा पनि ‘पासवर्ड’ रिलिज गर्दै छौँ । र, सन्नी लियोनीको चलचित्रमा के भूमिका छ ? भन्ने दर्शकको कौतूहललाई हलमै मेटाउने छौँ ।'
उनी थप्छन्, 'पहिलो चलचित्र ‘ह्याप्पी डेज’मै सन्नी लियोनीलाई काम गराउने भन्ने हाम्रो सोच थियो । त्यस अनुरूप पहिलो चरणको कुरा सन्नीसँग राखिसकेका थियौँ । उहाँ पनि हामीसँग काम गर्ने मनस्थितिमै हुनुहुन्थ्यो । तर, निर्देशक मिलन चाम्सले चलचित्रको बजेट भारी हुने भने पछि ‘ह्याप्पी डेज’मा सन्नी जीलाई खेलाउन सकिएन । त्यसपछि हामीले पुन: ‘पासवर्ड’को लागि अफर गर्‍यौँ । उहाँले सहर्ष स्विकार्नु भयो ।' राम्रो ३-४ वटा नेपाली चलचित्र निर्माण हुने बजेट ‘पासवर्ड’मा खर्चिएको र नेपालबाट यो लगानी रिकभर होला भन्ने आशा नभएकाले चलचित्रको विश्वव्यापी रिलिजको लागि तयारी गरिरहेका उनले बताएका छन् । ओभरसिज रिलिजको पहिलो चरण अन्तर्गत १२ देश अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया, इंग्ल्याण्ड, जापान, कोरिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, क्यानडा, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, जर्मनी र मलेसियामा २० सेप्टेम्बर (असोज ३) गतेदेखि एकसाथ प्रदर्शन गर्ने तयारी समेत रहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
यसका साथै चलचित्र पर्यटन विकासको लागि भरपर्दो माध्यम भएको र अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारलाई नेपाली चलचित्रसँग जोड्दा चलचित्रको मात्र नभई पर्यटन विकासमा पनि सघाउ पुग्छ । सन्नी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारले नेपाली सिनेमा र नेपालको बारेमा बोल्दा पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार हुन्छ ।त्यसैले फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि हाम्रो कदमले नेपालको कतिसम्म प्रचार गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । भन्ने आशय उनको रहेको छ ।
रंगशाला निर्माणमा हुलाक कर्मचारीको सहयोग(भिडियो)
फ्यानको मोबाइल खोस्दा विवादमा सलमान खान
‘दि कर्मा’लाई च्यारिटिमा राम्रो प्रतिकृया
कस्तो बन्दै छ ‘लक्का जवान’को गीत 'मुसुक्क हासन माया'(फोटो फिचर)
तक्मेबुढालाई जन्मदिनमा छोरा उपहार